Wadooyinka qaar ee Muqdisho oo xiran | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Wadooyinka qaar ee Muqdisho oo xiran
Isgoysyada saakay xiran ayaa waxaa ka mid ah Digfeer, KPP, Bakaaraha, Hawlwadaag, Foloransa, Tarbuunka, Sayidka, Shaqaalaha iyo Isgoyska Dabka, iyada oo sidoo kale ay jiraan wadooyin kale oo xiran.
Gaadiidka ay saaran yihiin dadka shacabka ah ayaanan isaga kala gudbi karin Isgoysyada Magaalada gudaheeda, waxayna isticmaalayaan qaarkood wadooyinka qarda jeexa ah, halka qaarka kalena ay maanta sameeyeen shaqo joojin.
Gaadiidka rayidka ayaa loo diidayaa dhamaan Isgoysyadan inay maraan, kaliya waxaa loo ogol yahay kuwa ay wataan ciidamada dowladda Federaalka Soomaaliya, iyada oo weliba Gaadiidka Ciidamada si buuxda loo hubinayo.
Isgoysyada Magaalada waxaa lagu jaray Gaadiidka Cabdi Bilaha oo ay hor fadhiyaan Ciidamo wata qoryaha cul culus oo uu ka mid yahay 7-ka, xitaa waxaa jirta in dad shacabka ah lugtooda in ay ku maraan loo diidayo wadada u dhaxeysa Dabka ilaa Madaxtooyada.
Hareeraha wadooyinka waxaa taagan oo xirnaanshaha wadooyinka uu saameeyay shacab aad u fara badan oo dano kala duwan lahaa, waxaana shacabka wadooyinka taagan ay isugu jiraan Arday, dad shaqo tag ah, dad dalka ka duulaya oo Garoonka dhankiisa aadi lahaa iyo dadka qaarkood oo booqanaya ama sahay u sida eheladooda oo ka xanuunsan, kuna jira Isbitaalada.